Mw Cmc Oo Dhagax-dhigay Dhismayaasha mashaariicaha degmada cusub ee kudunbuur. - Cakaara News
Mw Cmc Oo Dhagax-dhigay Dhismayaasha mashaariicaha degmada cusub ee kudunbuur.
Kudun-buur(Cakaaranews) jimce,25ka march, 2016, Waftigii uu hogaaminayay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ay ku wehelinayeen masuuliyiin sare oo uu ka mid yahay madaxwayne ku xigeenka DDSI ahna wasiirka horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha DDSI mudane Cabdixakiin Cigaal Cumar ayaa ka qaybgalay xaflada loogu dabaaldagayo daahfurka degmada cusub ee kudun-buur iyo dhagax dhiga mashaariicaha kala duwan ee degmadan cusub.
Waftigan ayaa markii uu gaadhay xarunta degmadan kudunbuur waxa ay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadan si balaadhan ay ugu soo dhaweeyeen waftigan caleemo qoyan iyo calamaan ay kulayeen taasi oo ay ku muujinayeen dareenkooda farxadeed ee dabaal daga degmadan cusub iyo soo dhawaynta waftigan.
Waxaana furitaankii xafladan ka hadlay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ugu horayntii ugu mahad celiyay bulshadan sida diiran ee loo soo dhaweeyay waftigan iyo sida quruxda badan ee loo diyaariyay goobta ay xafladu ka dhacaysay.
Madaxwaynaha ayaa ka warbixiyay dadaalada ay xukuumada DDSI ugu jirto sidii shacabka deegaanka looga saarilahaa saboolnimada loona gaadhsiinlahaa wadamada uu dhaqaalahoodu meel dhexeedka yahay. Sidoo kale waxa uu madaxwaynuhu sharax dheerka bixiyay soonyaalkii taariikheed ee uu deegaanku soo maray gaar ahaan dhinacyada siyaasada, nabadgalyada,horumarka iyo maamulka suuban. Madaxwaynaha ayaa si qoto dheer uga waramay aas aaskii iyo isbadalkii XDHSI iyo sifooyinka uu kaga duwan yahay XDSHSI xisbiyadii hore u soo maray deegaanka
Gabagabadii xafladan ayaa waxa uu madaxwaynaha DDSI mudane cabdi maxamuud cumar dhagax dhigay dhismayaasha mashaariicaha kala duwan ee degmadan cusub ee kudun-buur oo ka mid ah 25tii degmo,2dii maamul magaalo iyo labadii gobol ee uu dhawaan ansaxiyay golaha baarlamaanka DDSI waxayna ku taalaa gobolka qoraxay.